सेक्स गर्दा के के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ
रेडियो टाइम्स सोमबार, भदौ ८, २०७७, १९:४४:००
१. सुम्सु म्याउनु
हुनत सम्भोगकालागी यौनांग नै महत्वपुर्ण हो । त्यसैले अधिकाशं मानिसको ध्यान यौनां गतर्फ नै केन्द्रित हुन्छ । तर स म्भोग पुर्व पार्टनरको शरीरका बिभिन्न अंगहरु सुम्सु म्याउनु वा चुम्नुले थप आनन्दित बनाउँछ । यसका पार्टनरको स्तन, पेट, घाँटी, नितम्बलाई चुम्दा यसले पार्टनरलाई अझका मुक बनाउँछ ।
२. शरीरको सन्तुलन
सम्भोगका बेला चुम्बन सबैभन्दा महत्वपुर्ण मानिन्छ । प्रायः चुम्बनले नै सम्भोगको शुरुवात गर्दछ । तर यसलाई निरन्तरता भने दिइरहन् पर्दछ । तर आसन सहि नहुँदा सम्भोगका क्रममा चुम्बन गर्न असहज हुन सक्छ । तर्सथ सहि आसनमा पार्टनरसँग चुम्बन गर्दै सम्भोग गरेमा यसले थप आनन्द थप्दछ ।
प्रायः अवस्थामा सम्भोगको दौरान पार्टनर सन्तुष्ट नभइ पुरुषको विर्यस्खलन हुने समस्या हुने गर्दछ । यसले पार्टनरलाई पुर्ण यौन आनन्द प्राप्त हुदैन । तसर्थ छिटो स्ललन हुने समस्या नियन्त्रण गर्न बीचबीचमा पाक क्रिडामा समय दिनु पर्दछ । साथै केहि प्ुरुषमा लामो यौन चाहनाले समेत उसको पार्टनरलाई सन्तुष्टि दिँदैन । यसले पार्टनर पीडा गराउन सक्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ८, २०७७, १९:४४:००
सैनामैनाका ६ जना दृष्टिबिहिन युवाहरु आत्मानिर्भर बन्दै सोमबार, भदौ ८, २०७७, १९:४४:००
नेपाली काँग्रेस सैनामैना नगर सभापति पदमा नारायण खनालको उम्मेद्वारी घोषणा सोमबार, भदौ ८, २०७७, १९:४४:००
हरितालिका तीज र यसको मौलिकता सोमबार, भदौ ८, २०७७, १९:४४:००
सैनामैनामा रेग्मीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल गठन सोमबार, भदौ ८, २०७७, १९:४४:००